Nagu saabsan - Ningbo Beilun Mashiinka Mashiinka Dhamaystiran Co., Ltd.
Ningbo Beilun Mashiinka Si Buuxda.Co., Ltd.
Taxanaha GH-xawaaraha sare-dhuuban-derbiga khafiifka ah mashiin gaar ah oo ay soo saaraan Ningbo Beilun Fully Machinery.Co., Ltd, wuxuu isku daraa tiknoolajiyada xakamaynta dhamaadka sare ee Japan, Jarmalka, Talyaaniga iyo dalal kale, iyada oo la jabinayo dhowr dhibaatooyin farsamo. Jirka ugu weyn ee mashiinka wax lagu duro ee cirbadeynta ah wuxuu qaataa nidaam cadaadis sare, sax ah, jawaab celin sare sifekta loo hubiyo si loo hubiyo in hawlgal kasta xiriiriyayaashu ay yihiin kuwo si hufan u shaqeeya isla markaana keydsada tamarta. Nidaamka cirbadeynta wuxuu qaataa naqshadeynta wareegga saliidda ee laba-dhululubo caalami ah oo horseed u ah caalamka. Cadaadiska duritaanka wuxuu gaarayaa 23Mpa gudaha, horusocodka duritaanka wuu gaari karaa500mm/ sec, iyo xawaaraha duritaanka ugu sareeya waxaa lagu gaari karaa 0.06 ilbiriqsi gudahood. Naqshadeynta habka isku haynta iyo jirku wuxuu adeegsanayaa 3D iyo tiknoolajiyad falanqeyn xoog ah, oo loogu talagalay hawlgalka xawaaraha sare, kordhinta xawaaraha hawlgalka iyo hubinta in saxnaanta isu soo celinta furitaanka caaryada iyo isku haynta lagu xakameeyo inta u dhexeysa 0.5mm, taas oo wuxuu si wax ku ool ah ula kulmi karaa nidaamka xawaaraha-dhuuban ee xawaaraha sare Shuruudaha hawlgalka ee mashiinka wax lagu duro ee irbadda ayaa ka dhigaya wax soo saarku mid xasiloon.
FL Makiinado, waxaan si buuxda u fahamsanahay baahida macaamiisha ee jawiga tikniyoolajiyadda ee isbedelaya.
Injineeradeennu waxay had iyo jeer ku dadaalaan sidii ay macaamiisheenna u siin lahaayeen xalka ay u baahan yihiin si ay uga sii horreeyaan tartanka.
Mashiinka FL wuxuu hubiyaa tayada wax soo saarka iyadoo la adeegsanayo waxyaalo tayo sare leh Yurub, ah USA, Jabbaan, iyo Taiwan. Ayadoo la adeegsanayo naqshadaynta softiweerka 3-D ee horumarsan, injineeradeenu waxay la yimaadeen mashiinno casri ah oo casri ah oo isku dhafaya teknoolojiyada ugu dambeysa ee farsamada, korontada iyo korontada hal mashiin, si ay u soo saaraan mashiinno caag ah oo aad u hufan oo aad u hooseeya.
Mashiinka FL waa midka ugu tayada fiican, leh dabeecad adag oo adag, xoog qufulka caaryada xoogan iyo cadaadiska duritaanka sare iyo waliba saxsanaanta sare. Mashiinkayagu si fiican ayuu caan ugu yahay macaamiisha dhexdooda adkaysigooda, isticmaalka tamarta hooseeya iyo isku halayntooda.
Waxaan FL Makiinado ku soo dhaweyneynaa adiga iyo talooyinkaaga qiimaha leh ee ku saabsan horumarinteena joogtada ah iyo joogtaynta.
Mashiinka FULLY waa aamin lagu kalsoonaan karo, raagaya, oolnimada sare, keydinta tamarta, saxsanaanta sare, fikradda naqshadeynta ilaalinta deegaanka, oo ay weheliso Japan, Jarmalka, Talyaaniga iyo wadamada kale ee tiknoolajiyadda xakamaynta dhamaadka, baahiyaha kala duwan ee gudaha iyo dibedda macaamiil cusub iyo kuwa duug ah oo leh xalka xallinta duritaanka habaysan iyo alaab iyo adeegyo tayo sare leh.
Suuqyada Waaweyn ee Dhoofinta: Waqooyiga Ameerika, Galbeedka Yurub, Bariga Yurub, Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, Bariga Aasiya, Bariga Dhexe, Badweynta Hindiya, Afrika
Sax Wax taaj oo kale duritaanka caaga, Sax Wax taaj oo kale Inc., Mashiinka wax taaj oo kale duritaanka Dhuuban, Cirbadeynta saxda ah, Wax taaj oo kale duritaanka sax, Saxsanaanta wax taaj oo kale,